Maungtintyin: စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း
လူသားသဘာဝရဲ့ အလွန်လှပတဲ့ပုံပန်းသွင်ပြင်တစ်ခုဟာ တစ်စုံတစ်ခုအတွက် စောင့်ဆိုင်းဖို့ စွမ်းရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်စုံတစ်ခု (ဒါမှမဟုတ်) ကျန်တဲ့ အခြားတစ်ခုခုအတွက် အမြဲတမ်း စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
သို့ပေမယ့် စောင့်စားခြင်းကို သဘောမတွေ့ မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ဖို့ မဟုတ်ပါ။ သင်ဟာ ဘယ်လို စောင့်ဆိုင်းရမယ်ဆိုတာ သိရှိရပါ့မယ်။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းအတွက် ခြားနားတဲ့နည်းလမ်းများ- တမူထူးတဲ့ အကြောင်းတရားများ ရှိပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ မျက်မှောက်မှာ ဘယ်လိုနေထိုင်တယ်ဆိုတာ မသိဘဲ အမြဲတမ်း စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အခါ- ဒါက အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပျင်းရိတဲ့ သဘောသဘာဝရဲ့ ထင်ဟပ်မှုပုံရိပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သင် ပျင်းရိ လေလေ- သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်ဟာ များစွာ သတိမပြုမိလေလေ- အပြင်ပန်း ပုံပန်း ဟန်ပန်အလိုက်- သင့်ရဲ့ အပေါ်ယံမျက်နှာပန်းသဘာဝနှင့်လိုက်၍- သင်ဟာ အပေါ်ယံမျက်နှာပြင် ပေါ်မှာ နေထိုင်လေလေ-ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ဟာ အလွယ်တကူ စောင့်ဆိုင်းလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါက ဖင့်နှေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖင့်နှေးခြင်းမှာ- တစ်ဦးတစ်ယောက်က အကျွန်ုပ်တို့ အလိုရှိတဲ့ အရာ တွေ လာရောက်ပြီး အကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာ မျော်လင့်လျှက်- ပြောင်းလဲဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အမြဲတမ်း တစ်စုံတစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းကြပါတယ်။ လူသားသဘာဝက အဲဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ သင်ကိုယ်တိုင် လေ့လာစောင့်ကြည့်လျင်- နေ့တိုင်း မီနစ်တိုင်းမှာ ဘ၀ဟာ အမြဲတမ်း သင့်ရဲ့တံခါးဝကို ခေါက်နေတယ်ဆိုတာ သင် တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ပြောင်းလဲဖို့ သင့်ကို ပြောနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ပြောင်းလဲဖို့ သတ္တိမရှိပါ။ (သင်ဟာ တိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲကို စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။) သင်လိုချင်တဲ့အပြောင်းအလဲ တထေရာတည်း သင် ဖြစ်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါ။
အကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ငြိမ်းချမ်းချင်ကြတယ်၊ ညီညွတ်ချင်ကြတယ် ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စင်စစ်မတော့ ဒီအရာများ ကို အောင်မြင်ခြင်းအတွက် ဘယ်လောက်လောက်များ အလုပ် လုပ်ကြပါသလဲ?
သဘာဝတရားဟာ မကြာခဏ ကြိုဆိုလက်ခံနိုင်တဲ့အဆုံးပိုင်းကို ရောက်လာပါတယ်။ လူသားရဲ့ ပြုဖွယ်ဆောင်တာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုက အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်ကျိုးရှာ အမြတ်ထုတ်ခြင်းကို ပေါ်ပေါက်စေပါတယ်။ သာဓကအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်း စေခြင်းများပါ။
သဘာဝတရားက သင့်ကို ပြောင်းလဲစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်က မပြောင်းလဲပါ။ သင်ဟာ စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ် (ဘာအတွက်လဲ?)။ ပြီးတော့ အခြေအနေအဖြစ်အပျက်တွေက ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်တဲ့အခါ ဘေးဒုက္ခတွေ ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို သဘာဝ (ဒါမှမဟုတ်) လူကလုပ်တာလို့ သတ်မှတ်ပါ။ ( ဖြစ်ရပ်မှန်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သူ့ရဲ့ခံနိုင်စွမ်းအတိုင်းအတာ ရှိတယ်ဆိုတာ- ပြီးတော့ တစ်နေ့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ စိန်ခေါ်တဲ့အခြေအနေများနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။)
တစ်ခါတစ်ရံ အဲဒါက လုံးဝအံ့သြခြင်းကို အကျွန်ုပ်တို့ကို ဖမ်းဆွဲထားပါတယ်။ (အဲဒါက သွေးလန့် စိတ်ချောက်ချားခြင်းတစ်ခုလို လားပါတယ်။) ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွါးတဲ့ကပ်ဘေးများ တိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပျက်ပြီး အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျိုးဆက်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အပြည့်အ၀ ပြင်ဆင်မထားပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ မှာတော့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒီရုတ်တရက်ဖြစ်ပွါးတဲ့ကပ်ဘေးများမှ သင်ယူကြရပါတယ်။ ပြီးတော့ အကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ- အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်လို့ လားရောက်စေဖို့ ခြေလှမ်း များကို ယူရာမှာတောင် အဲဒါမှ သင်ယူကြရပါတယ်။
သင်ဟာ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ- ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာ- သည်းခံမှုကို လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာ- ဆက်နွှယ်ပတ်သက် ရမယ်ဆိုတာ- သင် နားလည်သဘောပေါက်တဲ့တစ်နေ့- အဲဒီနေ့မှာ ဘ၀ရဲ့လမ်းအသစ်တစ်ခု စတင်ခြင်း ဖြစ်လာပါတယ်။
သင်ဟာ သည်းခံမှုမရှိလင့်ကစား- ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိလင့်ကစား- ငိုညည်းတယ်- ငြီးငြူတယ်ဆိုလျင်- သင်ဟာ သင့်ကို လှုပ်နှိုး တံခါးခေါက်ဖို့ အကြီးမားဆုံးနဲ့ ပါဝါအများဆုံး တူကို အသုံးပြုဖို့- သဘာဝကို ခွင့်ပြုလမ်းဖွင့်ပေးလိမ့်မယ် ဆိုတာ-မှတစ်ပါး- ဘာတစ်ခုမျှ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ။
စောင့်ဆိုင်းရခြင်းဟာ ကောင်းပါတယ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်လို စောင့်ဆိုင်းရမယ်ဆိုတာ သင်က သိရှိမှသာပါ။ Aurobindo Ashram ရဲ့မိခင်က ပြောပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သင်ဟာ ဘယ်လိုစောင့်ဆိုင်းရမယ် ဆိုတာကို သင် သိတဲ့အခါ- သင်ဟာ သင့်ဘက်ခြမ်းမှာ အချိန်ကို ထားရှိပါတယ်။ သင့်မှာ အချိန်ရှိပါသေးတယ်။ (အချိန်ဟာ သင်နှင့်အတူ လာပါတယ်။) သည်းခံမှု တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့် ဘယ်လို စောင့်ဆိုင်းရမယ်ဆိုတာ သင်ယူပါ။
အများအားဖြင့် ကြောက်ရွံထိတ်လန့်တဲ့စွမ်းအင်များ- တင်းကြပ်မှုများအပြည့်ဖြင့် အဲဒီလို အကျွန်ုပ်တို့ စောင့်ဆိုင်းတဲ့အခါ- အကျွန်ုပ်တို့ ဟာ ဟန်ချက်မညီ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့မှာ အဲဒီစောင့်စားခြင်းကို သည်းခံမှုမရှိပါ။
အပြောင်းအလဲအတွက် စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းနှင့် သည်းခံမှုဖြင့်စောင့်စားနေခြင်းအကြား ခြားနားမှုဟာ- နောက်ပိုင်းမှာ သင့်ကို ယုံကြည် မျော်လင့်ထားတဲ့အရာကို သင် ပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဟာ သင်ရဲ့တာဝန်ကို လုပ်ပြီးပါပြီ။
အဲဒီနောက် သည်းခံမှုဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘက်ခြမ်းမှာ အချိန်ကို ထားရှိနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါက ဘ၀မှာ သင့်ကို အကောင်းဆုံး အမြန်ဆုံး အခွင့်အလမ်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်လမ်းခရီးဟာ သင့်ရဲ့ partner-ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ အလိုဆန္ဒရှိတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ရရှိဖို့ သင့်ကို ကူညီပါတယ်။
သင်မှာ အလိုဆန္ဒတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလျင် သင်ဟာ သည်းခံမှုလည်း ရှိရပါလိမ့်မယ်။ ရှိသင့်ပါတယ်။ မျိုးစေ့တိုင်းဟာ ပေါက်ဖွါးချင်ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပင်ကြီးတစ်ပင် ဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာ သည်းခံမှုဖြင့်သာလျင် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာပါတယ်။
သို့သော်ငြားလည်း- ဖြစ်မြဲပုံမှန်- အဲဒီအပြောင်းအလဲကို သယ်ဆောင်လာဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စောင့်ဆိုင်းခြင်း- (ညစ်ပတ်ရှုပ်ပွ ကမောက်ကမအခြေအနေများကို လာရောက်ဆေးကြောသုတ်သင် သန့်ရှင်းဖို့ အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို စောင့်ဆိုင်းခြင်း- သင့်တော်တဲ့ခြေလှမ်းကို ယူဆောင်ရန် ပဏာမခြေလှမ်းကို ယူဖို့ အခြားတစ်ဦး တစ်ယောက်ကို စောင့်ဆိုင်းခြင်း)- လို့ ဆိုလိုအဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ အပြောင်းအလဲကို အကျွန်ုပ်တို့ စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။
ဒါဟာ အတောမသတ်နိုင်တဲ့ စောင့်ဆိုင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Thursday, September 15, 2011